DHACDO NAXDIN LEH:- Nin dilay gabar loo diiday inuu guursado iyo qaar ka mid ah qoyskeeda. – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DHACDO NAXDIN LEH:- Nin dilay gabar loo diiday inuu guursado iyo qaar ka mid ah qoyskeeda.
Nin dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Iiraan ayaa la sheegayaa in maalintii Khamiista aheyd uu dilay 10 xubnood oo kasoo jeeday hal qoys islamarkaana ay ku jirto gabar la sheegay inuu doonayo inuu guursado, balse loo diiday.
Ninkaasi ayaa la sheegay inuu ka carooday, kadib markii loo diiday inuu guursado gabar ay dhaleen qoyskaasi oo ku nool degmada Jihaan Abaad ee gobalka Karmaan ee Waqooyi Bari ee dalka Iiraan.
Ninkaan ayaa la sheegayaa inuu qoriga AK-47 u adeegsaday toogashadaasi naxdinta leh, isagoo markii hore dilay gabadhii loo diiday, kadibna uu ku jeestay qeybaha kale ee qoyskeeda, isagoo dilay 9 qof oo ay ku jireen 3 haween iyo 2 caruur ah.
Sidoo kale, ninkaasi ayaa la sheegayaa inuu dhaawacay 5 qof, kuwaasi oo 2 ka mid ah xaaladooda caafimaad ay haatan aad u liidato, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka dadkaasi lagu daaweynayo.
Si kastaba ha ahaatee, dilalka noocaan oo kale ah ayaanay ku cusbeyn dalka Iiraan, iyadoo sanadihii ugu dambeysay ee lasoo dhaafay ay dalkaasi ka dhaceen dilal ku xiriirta falalka diidmadda ee guurka iyo weeraro aashito (Acid Attacks) oo lala beegsado haweenka sida aadka ah u da’da yar ee ku nool dalkaasi.